Togo: Manararaotra ny fivoaran’ny teknolojia ireo vehivavy sy ireo tanora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2010 5:53 GMT
Tamin'ny faha-17 Jona, nisokatra tany Ouagadougou, Burkina-Faso[fr] nyfihaonam-be panafrikana fahatelo mikasika ny fomba fampiasa tsara indrindra ny ICT [TIC amin'ny teny Frantsay; Teknolojian'ny Fampitambaovao sy ny Fifandraisana] any amin'ny tany miteny frantsay ao Afrika . Raha miompana kokoa amin'ireo ftetika hifehezana ny heloka bevava anaty Aterineto ny fihaonam-be, ireo tontolon'ny blaogy Togolezy kosa dia manararaotra sy miresaka ny tanjaky ny teknolojian'ny fampitam-baovao ho amin'ny fampandrosoana, indrindra fa ny vehivavy sy ny tanora .
Raha itodihana ny fihaonam-be, mitatitra i Sylvanus Abano ao amin'ny bilaogy togo-presse-liberte fa mampitandrina amin'ny loza mety ateraky ny heloka bevava anaty Aterineto i Hamadoun Touré, Sekretera Jeneralin'ny Union internationale de télécommunication [UIT] [fr]:
100 lavitrisa dolara isan-taona no saran'ireo heloka bevava anaty Aterineto ary tsy tsara fiarovana araka izay eritreretintsika iska .
Manadihady an'i Roger Kpakote, mpahay informatika sy Tale Jeneralin'ny Vondrona RTK ao Lomé mikasika ny fivoaran'ny ICT eo amin'ny fireneny [fr] i Togozine, sehatra aterineto Togolezy iray manana ny lanjany, :
Namorona ny OPIM [Organization for the Promotion of Internet and Mobile (teknolojia)] any Togo Andriamatoa Kpakote sy ireo namany[..] Te hanaparitaka ny fampiasana ny teknolojian'ny fampitam-baovao ho an'ireo ambaratongam-piaraha-monina rehetra eo amin'ny firenena ny OPIM. Maniry ihany koa izy ny hamorona vondrona iraisam-pirenena momba ny teknolojia any Togo izay atokana hanapariahana ny teknolojia mampiasa ny zava-maniry [Biotechnology] sy ny teknolojian'ny fampitam-baovao. Efa eo am-panomanana amin'izao fotoana izao ireo tetikasa maro toy ny Barcamp voalohany any Togo.
Togoley mpianatra amin'ny Ambaratonga Ambony nalaina tamin'ny Flickr-n'i Paul-W ary mampiasa ny CC license < http://www.flickr.com/photos/paul-w-locke/ >
Ao amin'ny bilaogin'ny OPIM, manoritsoritra ny taharon'ny fahombiazany teo amin'ny sehatry ny teknolojian'ny fampitam-baovao [fr] i Mr Kpakote:
Tokony hanana fanalahidy telo lehibe ny tsirairay : iireo manana ny votoatiny ( ahitàna ireo mpanao gazety ), ireo mpandraharaha ary ireo mpanorina [..] Ny endriky ny fanalahidy dia ny tokony haha-eo amin'ny aterineto ny tsirairay, ilain”ny vahoaka maro ary mahazaka ny vokatr'ireo zavatra natao ireo ao aoriana kely. Tsy mbola tonga miaraka anefa ireo fepetra ireo any Afrika .
Mihevitra i Muriel , mpianatra any Lome, fa , na dia eo aza ireo olana vao haingana, misy ny fanantenana ho amin'ireo vehivavy Togolezy eo amin'ny sehatry ny ICT [fr]:
Tokony hanararaotra ity tontolo vaovao ity ireo vehivavy na dia eo aza ireo olana amin'ny fidirana amin'izany . Tena zava-dehibe mihitsy izy ity ho an'ny fiaraha-monina Afrikana ary arak'izany tokony hiasa mafy ireo vehivavy Afrikana mba handray ireo tranga rehetra miseho atolotry ny teknolojia .
Manoratra somary lavalava i Claudine Assiba Akapko mikasika ny anjara asan'ireo vehivavy amin'ny fitandroana ny fandriampahalemana any Afrika [fr]:
Maneho mihoatra ny 3/4 amin'ireo vahoaka 40 tapitrisa nafindra monina tao aorian'ny krizy na ireo ady nangotraka teto amin'ny kaontinantantsika ireo vehivavy sy ny ankizy. Manana anjara asa lehibe raisina ireo vehivavy . Tena zava-dehibe ny mampiditra lalina azy ireo amin'ny fifampiraharahana sy ny fananganana drafitra ho amin'ny fandriampahalemana [..]
Ahoana ny fomba ahafahan'ireo vehivavy mandray anjara bebe kokoa amin'ny fananganana drafitra ho amin'ny fandriampahalemana?
1. Asandratra ny fandraisan'anjaran'ireo vehivavy amin'ny fifampiraharahana ho an'ny fandriam-pahalemana satria matetika ireo vehivavy no misedra olana mafy rehefa manao zavatra izy ireo .
2. Ampitomboina ny fandraisan'ireo vehivavy anjara amin'ny fametrahana azy ireo amin'ireo toerana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fananganana ny fandriampahalemana sy ny fampiraisam-pirenena .
3. Zarina amin'ireo teknikan'ny fifampiraharahana ireo vehivavy.
4. Fampianarana beb kokoa sy mendrika ho an'ireo tanora tovovavy : tena filana fototra tsy maintsy atao ny fanohanana ny fahaiza-manaon'ireo tanora tovovavy mandritry ny fampianarana azy ireo .
Manomboka mihazakazaka miditra amin'ny tontolon'ny bilaogy ihany koa ireo tanora. Ao amin'ny Blaogy Médias Jeunesse et Développement , miresaka i Marie momba ny maha-zava-dehibe ny fanampiana ireo ankizy tsy dia nahazo tombony rehefa tonga amin'ny haino aman-jery vaovao izany [fr]:
Any amin'ireo firenena Afrikana, misy karazany roa ny ankizy : ny iray izay afaka mamaky teny ary ireo izay tsy afaka . Matetika ireo mahay mamaky teny sy manoratra no avy amin'ny fianakaviana manana izay nahita fianarana, ary etsy andaniny kosa ny mahantra tsy afaka mahazo izany zava-tsoa izany [..] Hahatonga azy ireo ho afaka hanome ny fijoroan'izy ireo ho vavolombelona mikasika ny toe-piainany sy hiaro ireo zony ny fampidirana ireo ankizy ireo amin'ny vondron'ny haino aman-jery .
Eo amin'ny sehatra io ihany, i Détogra Jérôme dia mandanja ihany koa ny tombontsoa amin'ny fahazoan'ireo ankizy handray anjara [fr]:
Hahatonga azy ireo ho afaka haneho ny heviny amin'ny famahana ireo olana ao anatin'ny fiarahamoniny ny fandraisan'izy ireo anjara, ka ahatonga azy ireo hio afaka mitombo miaraka amin'ny fiarahamonina. Ny fahombiazana lehibe amin'ireto fandraisana fepetra ireto dia ho afaka ny haminavina ny ho aviny ireo ankizy ary hizara ny heviny amin'ny alalan'ireo haino aman-jery [..] Tsy maintsy nahatsikaritra ny tsirairary fa voalohany indrindra, tsy nanaiky loatra izao ireo raiamandrenintsika, fa rehefa hitan'izy ireo ny vokatra azontsika, dia fantatr'izy ireo fa ho an'ny tombontsoantsika izany .